Meydad hor leh oo Gubtay oo saakay laga soo saaray Xarunta Hay’ada UNDP ee Magaalada Muqdisho iyo Baadi goob wali socda	|
Meydad hor leh oo Gubtay oo saakay laga soo saaray Xarunta Hay’ada UNDP ee Magaalada Muqdisho iyo Baadi goob wali socda
Wararka naga soo gaaraya xarunta heyadda UNDP ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in gudaha xaruntaas laga soo saaray saaka meydad hor leh oo ku dhintay weerar isugu jiray isqarxin iyo mid toos ah oo shalay halkaas lagu qaaday kaasoo ay sheegatay Al-Shabaab.
Goob joogayaal xaruntaas ku sugan ayaa sheegaya tirada meydadka halkaas laga soo saaray saaka ay gaareyso illaa lix qof, kuwaasoo la sheegay in dhamaantood ay gubteen, muuqaal ahaana aan la aqoonsan karin.
Ciidamada dowlada oo illaa shalay halkaas joogay ayaa weli baaritaano ka dhex wada gudaha xaruntaas, waxaana laga cabsi qabaa in meydadka dad kale laga soo gelo gudaha xaruntaas oo burbur xoogan uu ka muuqdo.
Lama oga illaa cida ay ahaayeen meydadkan cusub ee laga helay xarunta, hase ahaatee saraakiisha ciidamada dowlada ayaa sheegaya iney baaritaan ku hayaan ayna ogaan doonaan dadka ay ahaayeen.
Tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay xarunta UNDP oo la shaaciyey iney ahaayeen 15 ayaa meydadkan cusub ee la helay waxay ka dhigeysaa in ka badan 20 qof, waxaana saaka halkaas gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo xubno kale oo halkaas kormeeraya.